मेस्सीको पिएसजी डेब्यु कहिले? | Hamro Khelkud
मेस्सीको पिएसजी डेब्यु कहिले?
एजेन्सी – अर्जेन्टिनी फरवार्ड लिओनेल मेस्सी फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी) मा अनुबन्धित भएपनि उनले हालसम्म डेब्यु गरेका छैनन् । मेस्सीलाई पिएसजीको जर्सीमा खेलेको हेर्न समर्थकहरुले अझै केहि समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
पिएसजीले मेस्सीलाई अगस्ट १० मा औपचारिक अनुबन्ध गरेपछि शनिबार लिग अन्तर्गत खेल खेलिसकेको छ । उक्त खेलअघि मेस्सीसँगै टोलीले यसै ट्रान्सफर विन्डोमा अनुबन्ध गरेका ५ खेलाडीलाई सार्वजनिक गरिएको थियो । नयाँ खेलाडीमध्य अक्रफ हाकिमी र जिओर्जिनिओ वाइनाल्डमले खेलिसकेका छन् । सर्जियो रामोस चोटका कारण फिट छैनन् ।
मेस्सी र गोलरक्षक जियानलुइजी डोनारुम्माले भने अन्तर्राष्ट्रिय खेलबाट ढिलो आएका कारण केहि प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको हो । डोनारुम्माले केहि अघि नै प्रशिक्षण थालेकाले अर्को साता खेल्ने सम्भावना छ । तर मेस्सीको हकमा भने प्रि सिजन प्रशिक्षण पनि नगरेकाले पूर्ण म्याच फिट हुन अझै केहि समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
पिएसजीले फ्रान्सेली लिगअन्तर्गत शुक्रबार राती हुने खेलमा ब्रेस्टको सामना गर्दैछ । उक्त खेलका लागि मेस्सी सुरुवाती रोजाइमा खेल्ने गरि फिट नहुने बुझिएको छ । तर टोलीमा रहेर उनी बेन्चबाट भने मैदान छिर्न सक्छन् । हाल म्याच फिटनेसका लागि प्रशिक्षण गरिरहेका मेस्सीले अगस्ट २९ मा हुने राइम्सविरुद्ध खेलमा सुरुवात गर्न सक्नेछन् । पिएसजीका समर्थकले उनलाई घरेलु मैदानमा हेर्न भने सेप्टेम्बर १२ को क्लेरमन्ट फुटविरुद्ध खेल कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
पिएसजीका प्रशिक्षक माउरिसियो पोचेटिनोले भने स्ट्रास्बर्गविरुद्ध खेलअघि मेस्सीलाई मैदानमा फर्कन केहि समय लाग्ने बताएका थिए । ‘मेस्सीले कोपा अमेरिका जितेको एक महिनापछि प्रशिक्षण गर्दैछन् । उनले आफू कस्तो अवस्थामा छु थाहा पाउन केहि दिन लाग्नेछ । त्यसपछि मात्र हामी उनलाई खेलाउनेबारे सोच्नेछौं,’ पोचेटिनोले भने ।
‘मेस्सी विशेष खेलाडी हुन् । हामीले उनको अवस्था के छ जानकारी पाएपछि त्यसै अनुसार तयारी गर्नेछौं । म आफैं पनि उनको खेल हेरेर मनोरञ्जन लिन्छु,’ उनले भने, ‘उनी खुसी छन् । हामी आफैंले पनि त्यो महसुस गरिरहेका छौं । उनी एकदम परिपक्व खेलाडी हुन् ।’
पिएसजीको खेल तालिका (नेपाली समय अनुसार):
ब्रेस्ट विरुद्ध पिएसजी (अगस्ट २१ शनिबार विहान १२:४५ बजे (शुक्रबार मध्यराती))
राइम्स विरुद्ध पिएसजी (अगस्ट ३० सोमबार विहान १२:३० बजे (आइतबार मध्यरात))
पिएसजी विरुद्ध क्लेरमन्ट फुट – सेप्टेम्बर १२